लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद विस्तार : कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ? | Ratopati
लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद विस्तार : कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreरुपन्देही access_timeअसोज २४, २०७८ chat_bubble_outline0
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मनित्रपरिषद विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेलगत्तै नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन् ।